Momba anay - Jilin Yuantong Mineral Co., Ltd.
Ny mombamomba ny orinasanay
Jilinyuantong Mineral Co., ltd. miorina ao Baishan, Faritany Jiling, izay misy diatomita avo lenta indrindra any Shina na dia any Azia aza, dia manana sampana 10, 25km2 ny velaran'ny fitrandrahana, faritra fitadiavana 54 km2, tahiry diatomite maherin'ny 100 tapitrisa taonina izay mitahiry mihoatra ny 75% amin'ireo tahiry voaporofo ao Shina. Manana tsipika famokarana 14 diatomite isan-karazany izahay, miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra 150 000 taonina isan-taona.
Hatramin'izao, any Azia, izahay izao dia nanjary mpanamboatra diatomite isan-karazany lehibe indrindra miaraka amin'ny tahiry loharanon-karena lehibe indrindra, haitao mandroso ary fizarana tsena avo indrindra any Shina sy Azia. Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2007, izahay dia nanangana orinasan-doka lalina ary lalina izay manambatra ny fitrandrahana diatomite, ny famokarana, ny varotra ary ny R&D miaraka amin'ny fanohanan'ny namana avy amin'ny lafim-piainana rehetra.
Ho fanampin'izany, nahazo ISO 9 0 0 0, Halal, Kosher, rafitra fitantanana fiarovana ara-tsakafo, rafitra fitantanana kalitao, taratasy fanamarinana fahazoan-dàlana hamokatra sakafo. Mikasika ny voninahitry ny orinasanay, izahay no talen'ny komity matihanina momba ny indostrialy mineraly tsy metalyika, ny diatomite sinoa mpanampy sivana an-tsokosoko sy ny ivon-toeran'ny teknolojia famolavolana orinasa Jilin.
Manaraka hatrany ny tanjona "mpanjifa voalohany", mazoto izahay manome ny mpanjifa vokatra tsara kalitao miaraka amin'ny serivisy sy torohevitra ara-teknika mety sy mieritreritra. Jilin Yuantong Mineral Co., ltd. Dia vonona ny hanana namana erak'izao tontolo izao ary hifanome tanana hamorona ho avy mamiratra.
Mpanamboatra diatomita voalohany any Chine.
Mihoatra ny vokatra fanao isan-taona
Ny anjaran'ny tsena dia mihoatra ny 60%